लामो समयसम्म मुलुकको शासन सम्हालेको र राणा र राजतन्त्रको निरङ्कुशताविरुद्ध लडेको कांग्रेस आज आफ्नै पार्टीको निरङ्कुशताको विरुद्ध लड्न परेको स्वयं कांग्रेस कार्यकर्ताले बताउन थालेका छन् । त्यस्तो गौरवमय इतिहास बोकेको कांग्रेस आज किन निरीह र दुर्बल हुन पुग्यो भन्ने कुरा कांग्रेस नेतृत्वले बुझेको देखिँदैन । वा बुझेर पनि नबुझेझैं गरेको अवस्था छ । आखिर किन हुँदैन कांग्रेसमा आन्तरिक लोकतन्त्र ? त्यसको एउटै प्रश्न छ, अहंकार र स्वार्थीपना । कांग्रेसको नेतृत्वमा अर्को एउटा ठूलो सरुवा रोग छ । त्यो हो रोग हो कार्यकर्ताको मूल्यांकन नहुनु र नेतृत्वमा पुगेपछि कार्यकर्ताको योगदानलाई सम्झन नसक्नु । यो कांग्रेसको वंशाणुगत रोग हो । कुनै काम पूरा गर्न निष्ठा, त्याग र समर्णपणको खाँचो पर्दछ । साँच्चै भन्ने हो भने कांग्रेसका कार्यकर्ताजस्तो अरु पार्टीका कार्यकर्तामा समर्पणको भाव कम छ । तर, त्यो कुरा नेतृत्वले बुझ्न सकेको छैन । त्यसैको परिणाम आजको दयनीय अवस्थामा कांग्रेस आइपुगेको हो । यो दुई चार वर्षको अवधिमा कांग्रेसको अवस्था भनेको ‘मनुष्य रुपेण मृगाश्चरन्ति’ को श्लोकसँग मेल खाने अवस्था हो । यो श्लोक कांग्रेसलाई नै चरितार्थ गरिएको हो किनभने कांग्रेसको अहिलो अडान र सिद्धान्त के हो भन्ने नै अन्योल छ । कुनै पनि टुंगोमा पुग्न त्यसमा प्रस्ट हुन जरुरी हुन्छ । राम्रोसँग नकेलाएर पकाएको चामलको भात खाँदा घाँटीमा ढुंगा अड्कन सक्छ । ठ्याक्कै कांग्रेसको अहिलेको अवस्था त्यही हो । सरकारमा छँदा होस् या बाहिर बस्दा उसले प्रतिशोध या आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थको लागि कांग्रेस नेतृत्वले जे जस्तो अडान र निर्णय लिएको थियो । त्यो अडान र निर्णय वास्तवमा ठीक थियो कि थिएन विचारै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्दा आज कांग्रेसले लजास्पद हार बेहोर्नु परेको हो । दूरगामाी असर पर्ने कुरामा निर्णय गर्दा नेतृत्वले आम कार्यकर्ताको भावना र संस्थागत परिपाटीलाई बेवास्ता गर्ने अर्को सरुवा रोग छ । यो सरुवा रोग कांग्रेसको जन्मसिद्ध अधिकारजस्तै हो । सर्वोच्चजस्तो जनताका अन्तिम सहाराको रुपमा रहेको अदालतमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरी जनताको र कार्यकर्ताको भावनाविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई महाअभियोग लगाउन अग्रसर हुनु, जनयुद्धमा कांग्रेस मास्न उसको घर खोज्दै हिंड्ने तत्कालीन माओवादीसँग स्थानीय चुनावमा चुनावी एकता गर्नु कांग्रेस नेतृत्वको महान् कमजोरी हो । यसैको प्रभाव संसदीय चुनावमा देखिएको छ र त्यसको कांग्रेसले अहिले भोगिरहेको छ । तर, विडम्बना अझै पनि कांग्रेस नेतृत्व तहका नेताले त्यो गल्तीको महसुस गरेको देखिँदैन । कांग्रेसलाई सशक्त र क्रियाशील बनाउनुपर्नेमा गुटगत भेला र एकअर्काप्रतिको आरोपप्रत्यारोपले स्थान पाएको छ । अहिले कांग्रेसको प्रस्ट नीति के हो भनेर कसैले सोध्यो भने एकअर्कालाई लडाएर आफू माथि उठ्ने हो भन्ने उत्तर आउँछ । यो काल्पनिक आरोप होइन । अहिले कांग्रेसमा भएको यथार्थ हो ।कांग्रेसमा सबै नराम्रा मात्र छन् भन्ने होइन पार्टीकै लागि भनेर जीवन अर्पण गर्ने नेता र कार्यकर्ता थिए र छन् तर उनीहरुको उचित कदर हुन सकेन । शक्ति र पहुँचको आधारमा राम्राभन्दा हाम्रालाई काखी च्याप्दै गएकोले कांग्रेसले अहिलेको चुनावमा नराम्रो हार बेहोर्नु परेको हो । कांग्रेसलाई वैतरणी नदी तार्न सक्ने नेता पार्टीमा छन् । तर, उनीहरुलाई नेतृत्व तहले बेवास्ता गरेको छ । राणाकालमा सार्वजनिक स्कुल खोलियो भने जनता शिक्षित हुन्छन् र हामीले सत्ताबाट बाहिरीनुपर्छ भन्ने हीन मासिकता बोकेका राणाहरु थिए । अहिले कांग्रेसमा त्यस्तै मानसिकताले काम गर्न थालेको हो कि भन्ने महसुस गर्न थालिएको छ । आखिर किन निष्ठावान् नेतालाई पार्टीको नेतृत्व गर्नबाट वञ्चित गरिन्छ त ? त्यो हो राणाकालको हीन मानसिकता नै हो सत्य लुकाएर लुकिँदैन तर सत्य, सत्य नै हुन्छ । अहिले कांग्रेसले प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिसमा परेर संसदीय समितिद्वारा अस्वीकृत भएका दीपकराज जोशीलाई प्रधानन्यायाधीश नबनाएको भन्दै विरोध ग¥यो । तर, उसले दीपकराज जोशी किन विवादमा आए भन्ने कुरालाई छानबिन गर्न सरकारलाई दबाब दिनुको सट्टा उनलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउनै पर्छ भन्ने मात्र भनिरह्यो । यदि कांग्रेसले दीपकराज जोसीको विवादित विषयवस्तुप्रति स्वतन्त्र छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर आएपछि आफ्नो धारणा बनाएको भए जनतामा छुट्टै खालको प्रभाव पर्थ्यो । तर, त्यो अवसरबाट कांग्रेस चुक्यो ।
त्यसै पनि दीपकराज जोशीको विगतका चरित्र स्वच्छ छैन भन्ने कुरा सर्वविदितै छ  । यस्ता अदूरदर्शी निर्णय गरेर कांग्रेसले आफ्नो खुट्टामा आफैं बन्चरो हान्ने काम गरेको छ । कतिसम्म भने पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरण गर्दा पनि गुट हेर्ने मानसिकता छ । जबसम्म कांग्रेसले यस्ता बेथिति, विवादित र अपरिपक्व काम गर्दै जान्छ तबसम्म कांग्रेस पूर्वावस्थामा पुग्न सक्दैन । कांग्रेसले अब सुधार्ने कुरा भनेको सबै कार्यकर्तालाई समान दृष्टिले हेर्नु र कुनै पनि निर्णय गर्दा संस्थागत ढंगले गर्नु हो । एकअर्कालाई दोष दिएरभन्दा आ–आफ्नो कमीकमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्नु नै कांग्रेसको हितमा छ । किनकि संस्थाभन्दा व्यक्ति कहिल्यै ठूलो हुन सक्दैन । लामो समय मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्दै आएको कांग्रेसको सरकार कहिल्यै स्थिर हुन सकेन । यसको कारण स्वयं कांग्रेस नै हो । एउटाले नेतृत्व गर्दा अर्कोले आफू कमजोर भइन्छ कि भन्ने मानसिकताले गर्दा कांग्रेस कहिल्यै पनि बलियो पार्टी बन्न सकेन । यो समस्या अहिलेको नेतृत्वमा मात्र होइन जन्मदेखि कै परम्परगत समस्या हो । यो बेला कांग्रेस सदनमा कसरी प्रस्तुत हुने र सरकारको कसरी र केको लागि विरोध गर्ने भन्ने नै अन्योलमा छ । उसले अहिले खालि विरोधको विरोध मात्र गरेको छ  । जबसम्म उसले पार्टीभित्रको गुटगत समस्यालाई समाधान गर्दैन तबसम्म उसले जति नै आन्दोलन वा सरकारविरुद्ध डम्फू बजाएर हिँडे पनि कांग्रेस उँभो लाग्दैन । अतः कांग्रेसको अहिलेको आवश्यकता भनेको पार्टीको सुदृढीकरण नै हो । (जनमञ्च साप्ताहिकबाट)